တရုတ်နောက်ဆုံးပေါ် ၅ လက်မလျှပ်စစ် Rotary ကားကြားခံ CHE-C6866 ပိုလန်စက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပံ့ပိုးသူများ | ခြခေငျြး
Professional 150mm6လက်မ Bi ...
အရည်အသွေးမြင့် 21mm Dual Acti ...
ရောင်းဝယ်မှုကို ၁၅mmmm Dual Actio ...
၃ လက်မ 12mm Orbital Sander M ...
CHE-C6866 ပိုလန်စက်၏နောက်ဆုံးပေါ် ၅ လက်မလျှပ်စစ် Rotary ကားကြားခံ
ပစ္စည်း NO ။ : CHE-C6866
MOQ: 100 အပိုငျးပိုငျး
ငွေပေးချေမှုကာလ: T / T က
ဤနောက်ဆုံးပေါ်5လက်မ rotary polisher သည်အပြင်းထန်ဆုံးအလုပ်များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ 1000W စွမ်းအားမြင့်သော tor အားကြီးမားသော torque ကိုထုတ်လွှင့်သောဂီယာ ၄ ခုပါ ၀ င်သောအထူးရွေးချယ်ထားသည့်လျှပ်စစ်မော်တာသည်ခက်ခဲပြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်ရသောအရောင်တင်ဆီများနှင့်အလုပ်လုပ်စေသည်။ အခြားအလှည့် polishers နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်းသည်ဖိအားကိုပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်အားလုံးဂျပန် NSK berings များတပ်ဆင်ထားသည်။ တိုးတက်သောအမြန်နှုန်းလည်ပတ်မှုစွမ်းဆောင်ချက်၊ ပျော့ပျောင်းသောစနစ်နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်အမြန်နှုန်းစနစ်တို့ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်၊ လက်မလည်ပတ်နိုင်သောမြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုသည် ၇၀၀ မှ ၂၅၀၀ RPM အထိပြောင်းလဲနိုင်သောအမြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုကိုပေးသည်။ ၎င်းတွင်စံပြု M14 ဗိုင်းလိပ်တံကိုရှိပြီးစျေးကွက်ရှိကျောထောက်နောက်ခံပြားများနှင့်သဟဇာတဖြစ်စေသည်။ မြင့်မားသော ergonomics သည်သက်တောင့်သက်သာရှိသောအလုပ်ကိုသေချာစေသည်၊ ၎င်း rotary polisher သည်ကြီးမားသော polishing အလုပ်များအတွက်အေးအေးဆေးဆေးလည်ပတ်စေသည်။
ပစ္စည်း NO .:
110-230V AC အ
၁၂၅ မီလီမီတာ (၅ လက်မ)
47.5x34.5x32.5 (စင်တီမီတာ) / 4sets
1pc 5in backing plate, 1pc လိမ်ဖဲ့ခြင်း၊ 1pc ဘေးထွက်လက်ကိုင်၊ 1pc လက်စွဲ၊ 1pc extension bar
ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်လက်ရာအတွက်ချို့ယွင်းချက်၏ 1 နှစ်ကန့်သတ်အာမခံ။
၁။ ဂျပန် NSK bearings အားလုံးနှင့်ဂီယာ ၄ ခုပါ ၀ င်သောကြောင့်၎င်းသည်တုန်ခါမှုအလွန်နည်းပြီးဖိအားကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
၂.Progressive switch ခလုတ်၊ ခလုတ်ခုံသည်အလုပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်းပိုမိုအဆင်ပြေစေမည့် 6-speed setting ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
၃. အားကောင်းသော 1000watt မော်တာသည်ချွတ်ယွင်းချက်များကိုလျင်မြန်စွာဖယ်ရှားပေးသည်။
ပျော့ပျောင်းသော start function နှင့်အတူ 4.Constant မြန်နှုန်းစနစ်။
7. Extra heavy-duty M14 (5/8 ") ဗိုင်းလိပ်တံကိုဗိုင်းလိပ်တံသော့နှင့်အတူ။
10. Auto shut-off ကာဗွန်စုတ်တံများသည်မော်တာပျက်စီးခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။
၁၁. တံဆိပ်ခတ်ထားသော ၁၀၀% ဘောလုံး - ဆောက်လုပ်ရေးသည်သက်တမ်းရှည်စေသည်။
A: ၁။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Alibaba ကိုနှစ်နှစ်ရွှေပေးသွင်းသူအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
၂။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၀ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသောပိုလစ်များကိုထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံတစ်ရုံဖြစ်ပြီးအကောင်းဆုံးထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်၊ အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု၊ အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းများကိုထုတ်လုပ်သည်။
A: ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့မပို့ခင်မှာ 100% QC စစ်ဆေးခြင်းကိုပြုလုပ်ပါတယ်
Q: OEM ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်မလား။
A: OEM အမှာစာလက်ခံပါတယ်။
A: ကျွန်ုပ်တို့၏ကားချောချောမွေ့မွေ့များသို့မဟုတ်အစိတ်အပိုင်းများအရည်အသွေးပြproblemsနာများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကားချောများအတွက် ၁ နှစ်အာမခံပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုဓာတ်ပုံနှင့်ဗွီဒီယိုများပို့ပေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာရှင်သည်၎င်းတို့အားစစ်ဆေးပြီးခွဲခြားသတ်မှတ်လိမ့်မည်။
ရှေ့သို့ Car Polishing CHE-C6800 အတွက်အဆင့်မြင့် 1000watt Rotary Polisher အသစ်
နောက်တစ်ခု: 5mm Car Polisher Polishing Machine 8mm Auto Wax Buffer DF8A
အရည်အသွေးမြင့် 21mm Dual Action ကား Orbital Rando ...
125mm အိတ်ဆောင် 900W ကျပန်း Orbital လျှပ်စစ်ကား ...
နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်း 900W 12mm Orbit Dual Action ကားခ ...
မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောတရုတ် 25mm 900W Long Throw Ran ...
၆ လက်မပြောင်းလဲနိုင်သောအမြန်နှုန်း ၂၁mm ကျပန်းကား ...